Murashaxiinta Madaxweynaha CCC Sharmaarke iyo Shiikh Shariif oo caawa Nairobi isku balansaday: | Local News | Shacabka Media
Murashaxiinta Madaxweynaha CCC Sharmaarke iyo Shiikh Shariif oo caawa Nairobi isku balansaday:
Ex Ra’iisal Wasaare CCC Sharmaarke iyo Madaxweynihii Hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa caawa ku kulmay magaalada Nairobi ee dalka Kenya iyagoo ka wadahadlay arrimo ku saabsan doorashooyinka dalka.
Kulankan ay isugu yimaadeen musharixiinta Madaxweynaha Soomaaliya ayaa sida ay sheegayaan wararka ku dhow dhow waxaa ay diirada ku saareen sida ay ka yeelayaan doorashada madaxtinimada iyagoo xilli soo noqday Madaxweyne iyo Ra’iisal Wasaarihiisa.
Hase yeeshee qaabka ay isaga kaashan karaan doorashada ayaan la ogeyn, maadaama labaduba ay yihiin musharixiin.
Musharax Madaxweyne Cumar Cabdirashiid Cali ayaa waxaa soo baxayay hoos u dhac ku imanayay ololaha doorashadiisa.
Balse Musharax Madaxweyne Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa bilaabay ololihiisa inuu sare u qaado isagoo labakaclayn bilaabay uuna macno u yeelo, waxaana uu dhowaan tegey Sheekh Shariif magaalada Kismaayo isagoo kula kulmay Madaxweynaha Jubbaland sidoo kale waxa uu magaalada Muqdisho kula kulmay xildhibaanada ka soo jeeda maamul goboleedyada dalka isagoo weydiistay taageero.
Sidoo kale Sheekh Shariif ayaa weeraray dowlada hadda ka jirta dalka isagoo ku tilmaamay inay yihiin dambiilayaal. Dadka siyaasada u dhuun daloola ayaa aaminsan in Sheekh Shariif ololihiisa doorasho ay wax ka qaldan yihiin maadaama uu ku xasili la’ yahay dalka uuna ololihiisa ka wado dalka dibadiisa.
Siyaasada Sheekh Shariif ee haatan ayaa lagu sifeynayaa in uu hoos ugaga dhacay hamigii dad badan ay ka lahaayeen maadaama uusan tixgelin badan siin xildhibaanada gudaha. Waxaana taas xoojinaya in markii uu dib ugu soo laabtay dalka lana filayay in uu ololihiisa ku xoojiyo gudaha uusan ku xasilin Muqdisho muddo toddobaad ah.
« Previous StoryMaalinta fasaxa caadadda haweenka ee Zambia oo dood iyo muran ka taagan tahay
Next Story »Tooshka Wareega ee Sh-Media oo helay nuqulo ka mid ah Liiska Murashaxiinta Gudoonka Baarlamaanka(Original-Document)